Soomaaliya oo u dabaaldagaysa sanadguurada 56-aad ee madaxbanaanida dalka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaSoomaaliya oo u dabaaldagaysa sanadguurada 56-aad ee madaxbanaanida dalka
July 1, 2016 Puntland Mirror Somalia, South-Central 0
Madaxweynaha DF Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo salaan sharaf ka qaadanaya ciidamada bambayda, Muqdisho 1-Luulyo, 2016-ka. Sawirka/Radio Muqdisho.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Wadanka Soomaaliya ayaa u dabaaldagaya munaasabada 56-aad ee madaxbanaanida dalka.
Xuska 1-da Luulyo oo ah maalintii ay gobolada Soomaaliyeed ee koonfurta ka qaateen xornimadooda Talyaaniga ahna maalinta ay midoobeen waqooyi iyo koonfur ayaa laga xusay gudaha dalka iyo dibadaba.
Gudaha Muqdisho munaasabad weyn ayaa xalay lagu qabtay xarunta dowlada hoose ee magaalada, waxaana kasoo qaybgalay munaasabada Madaxweynaha dowlada federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud iyo saraakiil sare oo dowlada ah.
Madaxweyne Xasan ayaa dhamaan ummada Soomaaliyeed ugu hambalyeeyay munaasabada kowda Luulyo, isagoo sheegay in xukumadiisa ay ka shaqayn doonto midnimada ummada Soomaaliyeed.
Dhanka kale, gobolada kala duwan ee dalka iyo Soomaalida kunool dibada ayaa xusay munaasabada kowda Luulyo.
Soomaaliya ayaa xornimadeeda ka qaadatay wadamadii gumaysiga ahaa ee Ingiriiska iyo Talyaaniga sanadkii 1960-kii.
Kadib burburkii xukuumadii gacaanka ahayd ee gelikiis taliye Maxamed Siyaad Bare Soomaaliya ayaan helin maamul rasmiya oo dowladeed.
Dowlada uu caalamka dabada ka riixayo ee Soomaaliya ayaa isku dayaysa sidii loo soo celin lahaa haayadihii dowlada ee wadanka kuyaala Geeska Afrika.